musha nyika dzakabatana NFL Vatambi Aaron Donald Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Wedu Aaron Donald Biography anokuudza chokwadi nezve rake rehucheche Nyaya, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki (Archie Donald naAnita Goggins), Mhuri, Hukama (Jaelynn Blakey naErica Sherman).
Moreso, iye Mutambi Hupenyu Hwemunhu, Mararamiro, Vanin'ina (Archie Donald III naAkita Marie Donald), mambure akakosha uye Mubhadharo.
Kuita yedu Biography ipfupi, tinokupa iwe yakazara mufananidzo weiyo Hupenyu nhoroondo yaAaron Donald, mutambi wenhabvu wekuAmerica weLos Angeles Rams muNational Soccer League. Yedu nyaya inotanga kubva panguva yake yekuzvarwa kusvika ave simba rekutarisa muNFL.
Kuti urodze chishuwo chako cheBiography yedu, isu tinopa iyo gallery nzira yezviitiko zvakatenderedza nhoroondo yehupenyu hwaAaron Donald.
Zvirokwazvo, iyo mifananidzo yaunoona pazasi inopfupisa nhoroondo yehupenyu hwemutambi.
A gallery nzira yakatenderedza nhoroondo yaAaron Donald - kubva pakuberekwa kusvika mukurumbira.
Ehe, iwe unofanirwa kumuziva seNFL Defensive Rookie yeGore mubairo. Iye zvakare AP NFL Defensive Player yeGore katatu.
Pasinei nekurumbidzwa kwake, vashoma vanoda Mitambo vakaverenga chidimbu cheAaron Donald's Biography.
Naizvozvo, isu tazviona sezvakanaka kuti tikushandire iwe inonakidza nyaya yaAaron Donald. Uye zvakare, iko kuparara kwechiitiko chake chemitambo kusvika parizvino. Zvino, pasina kunonoka, ngatitangei.
Aaron Donald Childhood Nhau:
Kutanga, Aaron Charles Donald akasvika pasi pano neChina chinofadza musi we 23rd waMay 1991. Akazvarwa naAnita Goggins uye baba vake, Archie Donald.
Mbiri yedu yekuAmerica yakazvarirwa kumadokero kwePennsylvania muUS City inozivikanwa sePittsburgh.
Zvakare, Aaron Donald akazvarwa pakati pehama dzake mbiri (Archie Donald III naAkita Donald). Ivo vese vakatorwa kubva kumubatanidzwa wababa vavo, Archie Donald naamai, Anita Goggins, vane mifananidzo yatinoratidza pazasi.
Tarira Aaron Donald Vabereki - amai, Anita Goggins uye baba, Archie Donald.
Vabereki vake vakamurera muPittsburgh, Pennsylvania. Aaron Donald, Archie III, uye hanzvadzi yake mukuru Akita vaigara pamwe naArchie Sr naamai vavo, Anita. Vakanga vari pamwe chete kusvikira vabereki vavo vakarambana apo Aaron aive 8.
Rwendo rwake munhabvu rwakatanga achiri mudiki. Amai vaAaron Donald, Anita Goggins, vakaparadzaniswa nababa vake, Archie Donald. Akazotamira kuDuquesne, PA, kwaakawana basa. Asi ipapo, Aaron akawedzera, uye saizvozvowo Chubby.
Mufananidzo wekutanga wechikara Aaron Donald.
Iye, mukuwedzera, akashanda zvishoma. Aiva mwana ane nungo. Kunyange zvakadaro, baba vake, Archie, vakaedza kuchinja mafungiro avo.
Akabatidza moto ari pasi paAroni pa12 nekumuzivisa kusimudza simbi. Aaron Donald aizoshanda kwemaawa maviri nababa vake mazuva ose na4:30 am.
Vaive nejim yekuzviitira mukamuri yepasi pemba yavo. Baba vacho vakadzidzisa Aaron nevakoma vake kukosha kwekushanda nesimba uye kusachinja-chinja.
Nekuda kweizvozvo, akafuridzira vana vake kushanda uye kusimudza. Ona kuti ma Workouts akachinja sei Aaron Donald mune clip iri pazasi.
Aaron Donald akatamba mutambo uyu kunakidzwa. Shure kwaizvozvo, akatanga kufarira bhora. Kunze kwezvo, hunyanzvi hwake hwakavandudzika. Akatora nhabvu zvakanyanya pakuenda kuchikoro.
Mhuri ichine yavo ine mwero imba ine nhurikidzwa mbiri kuChurchland Street. Iyo yepasi pasi ichine iyo yekurovedza muviri. Iyo iri munzvimbo yeLincoln-Lemington-Belmar munharaunda yekuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kwePittsburg. Ona mufananidzo pazasi.
Mufananidzo weiyo ine mwero imba ine nhurikidzwa mbiri mumugwagwa weChurchland uye yepasi neyekurovedza muviri.
Aaron Donald Mhuri kumashure:
Nyeredzi yeNFL yakaberekerwa mumba memhuri inoshanda-muPittsburgh. Baba vake, Archie, vaimbove mutambi wenhabvu kukoreji asi vaifanira kurega pamitambo mushure mekukuvadza kaputi yake yemabvi.
Kunyangwe aisakwanisa kuzadzisa chiroto chake, Archie aigara achikurudzira vana vake kuti vabudirire, sezvavari nhasi.
Aaron Donald Mhuri Kubva:
Nhabvu Star ndeyokuzvarwa kuPittsburgh. Moreso, baba vake, Archie Donald, akazvarwa uye akakurira muPittsburgh, Pennsylvania, kwaakaroora akazorera vana vake vatatu.
Iyi nharaunda yakaona kutama kukuru kwevaAfrica muma90s. Kunyangwe Vafambi vanoenda kuPittsburgh vakasangana nerusarura, vakapinda mumabasa asina basa, kuvaka, mimhanzi neMitambo.
Nhasi inozvirumbidza pamusoro peanofarira Christina Aguilera, Wiz Khalifa kunyangwe Aaron Donald pachake. Pittsburgh ikozvino ndiro guta rinogoneka muUnited States.
Sezvo Aaron Donald ari wedzinza reAfrica, isu tinonzwisisa iye ari African American. Moreso, anobva kuPittsburgh muPennsylvania, US. Mufananidzo uri pazasi unopa rumwe ruzivo.
Mufananidzo unoratidza Mhuri yaAaron Donald mavambo.
Aaron Donald Dzidzo:
Donald akaenda kuPenn Hills High Chikoro. Ikoko akatamba nhabvu yechikoro yemurairidzi mukuru Ron Graham. Icho chikoro chesekondari cheveruzhinji chiri kumabvazuva kwePittsburg. Kukoshesa kwaAaron munhabvu kwakatanga mushure mekunge ajoina timu yenhabvu kuchikoro.
Nenzira isingashamisi, nemamiriro ake ezvinhu okushanda nesimba, Aaron akaita zvakanaka kwazvo. Vakamusarudza yekutanga-timu All-State Kirasi AAAA mune imwe neimwe yemwaka wake miviri yekupedzisira.
Mudiki uyu akaunganidza 63 tackles, gumi neshanu kurasikirwa, uye gumi nerimwe masaga semukuru. Moreso, akatanga arindi anogumbura.
Donald akaenda kuPenn Hills High Chikoro, kwaakatamba nhabvu yechikoro.
Rivals.com yakatora Aroni setarisiro yenyeredzi nhatu. Akaverengerwa seye 37th yakanakisa kudzivirira kubata muUS.
Zvakadaro, Donald akaramba akazvipira kuguta rekumusha kwake, Pittsburgh. Zvisinei, akanga apiwa bhezari kubva kuToledo, Akron, uye Rutgers.
Ane degree rekutanga muCommunications. Pa 27th musi waApril 2020, Donald akaburitsa pachena kuti akapedza kudzidza kuYunivhesiti yePittsburgh.
Aaron Donald mushure memusangano wevadzidzi muPenn Hills.
Aaron Donald Bio - Hupenyu hwepakutanga (Basa):
Mumwaka wa2010, mugore rake rekutanga, Donald akatanga basa rake sekutsiva pabasa rekuchengetedza uye haana kuita mumitambo yakawanda. Nekudaro, na2011, anga asisiri chinotsiva asi munhu anotungamira anozvidzivirira wechikwata.
Akanga aine makumi mana makumi mashanu nematatu gore iro, 47 kurasikirwa, masaga gumi nerimwe, uye kumanikidzwa kumwe kupunzika. Mugore rake reJunior, akasimuka kusvika makumi matanhatu neshanu, 16 kurasikirwa uye kumanikidzwa kumwe kupunzika. Aya manhamba asinganetsi akamugadza pabasa rake rekoreji.
Mugore rake repamusoro, akange anyora 59 tackles, 28 kurasikirwa, uye ina yekumanikidza fumbles. Kuita kwaDonald kwakamuita kuti awane mibairo yakasiyana.
Mibairo iyi inosanganisira mubairo weakanakisa anodzivirira mutambi muNational Collegiate Athletic Association NCAA.
Uyezve, ACC inodzivirira mutambi wegore. Paakapedza koreji, Donald akanyoreswa kuNFL senge yegumi nematatu sarudzo yeNFL ya13.
Zvakare, Anobvumirana All-American. VaLouis Rams vakamusarudzira kontrakiti yemakore mana yerokie iyo yaigona kusvika pagore rechishanu.
Donald ari pane chaanogona - kuzvidzivirira kugadzirisa mamiriro.
Aaron Donald Biography - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira:
Iyo "cheat code" yakaita yake yekutanga NFL debut pazuva rechinomwe raGunyana 7 vachipesana neMinnesota Vikings.
Mutambo wakapera nekukundwa, asi akaita zvibodzwa zvina. Mimwe mitambo yakatevera nokukurumidza, uye akaratidza unyanzvi hwake.
Mushure memwaka we2014, akatumidza zita reNFL All-Rookie Team. Hazvishamisi kune chero munhu anotevera basa raDonald padhuze.
Pavakaona zest yake yenhabvu. Nenguva isipi akagadzirira kuve akanakisa kudzivirira kubata muNFL. Ona masaga ake akanakisa muvhidhiyo iri pasi apa.
Mumwaka we2015, Donald akave mutambi wekudzivirira weRams. Mutambo wake wekutanga waipesana neSeattle Seahawks.
Mushure mezvo, akabuda NFC Defensive Player yevhiki kaviri mumwaka we2015. Akabhejera mubairo weRookie anodzivirira wegore.
Aaron Donald Biography - Kumuka Mukurumbira Nhau:
Zvisineyi, Donald akagamuchira Iyo NCC Defensive mutambi wevhiki kaviri. Akabhadhariswa faindi zvakati wandei nekuda kwehunhu hwake husina hunhu mumwaka wake wa2016.
MaRams akawedzera kondirakiti yake yerookie kumakore mashanu pakapera mwaka we2017.
Akagadzira yake yekutanga Superbowl chimiro mu2018 mune Superbowl LIII. Zvakangodaro, akarasikirwa 13-3 neveNew England Patriots.
MaRams akabva amutsiridza kontrakiti yake yemakore matanhatu. Chibvumirano chakamuita wechipiri-wepamusoro-akabhadharwa-anozvidzivirira mutambi wemitambo muNhoroondo yeNFL mushure meKhalil Mack weChicago Bears.
Muna Ndira 2019, akazozivikanwa kunzi AP All-Pro Chekutanga Chikwata. Pakazosvika Kukadzi, Aaron Donald akakunda 2019 PFF Dziviriro Player yeGore. Vhiki mbiri gare gare, akanyorera masaga maviri kuna Josh Allen. Akave akatumidzwa zita rekuti NFC Anodzivirira mutambi wevhiki rekuita kwake.
Zvakare zvakare, vhiki nhatu gare gare, Donald akanyorera hombodo-saga pane rookie quarterback Tua Tagovailoa. Donald akarekodha saga rake rekutanga remwaka we2020 pa Dak Prescott panguva yekukunda kwe20-17. Vhiki mbiri gare gare, akanyorera masaga maviri kuna Josh Allen.
Akave akatumidzwa zita rekuti NFC Anodzivirira mutambi wevhiki rekuita kwake. Zvakare zvakare, vhiki nhatu gare gare, Donald akanyorera hombodo-saga pane rookie quarterback Tua Tagovailoa. Yakanga iri Tagovailoa yekutanga basa kupasa kuyedza panguva yemakumi maviri neshanu yemugwagwa kurasikirwa.
Uyezve, muna 2021, Donald akasarudzirwa Pro Bowl. Donald akadzinga Russell Wilson kaviri panguva yekukunda kwe30-20 muWild Card Round vachipesana neSeattle Seahawks playoffs. Akawana iye weNFL Anodzivirira mutambi wemitambo wegore kechitatu nguva mumakore mana.
Donald akazadzisa mukwikwidzi wemitambo weNFL wegore kechitatu kechitatu mumakore mana.
Aaron Donald Kufambidzana ndiani?:
Jaelynn Blakey ndiye musikana wenguva refu waAaron. Iye ndiamai kune vana vaviri. Parizvino, vaviri vacho vakagamuchira mwanasikana akanaka anonzi Jaeda muna Kubvumbi 2013. Zvichakadaro, Aaron Jr. akasvika makore matatu gare gare pazuva rechitanhatu raApril 6.
Donald naBlakey vese vakakurira kumadokero kwePennsylvania uye vaitaridzika kunge vaive vepamusoro chikoro vanonaka. Akaenda kuPenn Hills High Chikoro pamwe kwaakasangana naDonald. Jaelynn Blakey akapedza kudzidza muna 2010.
Blakey haaratidzike kunge ane Instagram, asi anofadza Donald kuburikidza neakaundi yake yeFacebook.
Vana vaDonald vakaonekwa vachiMufadza kanopfuura chiitiko chimwe. Aaron akanyoresa vana kuchikoro mutaundishipi yeOhio muPennsylvania.
Aaron Donald nevana vake vaviri, Jaeda (2013) naAaron Jr. (2016).
Sezvineiwo, Aaron haachisiri muhukama naJaelynn Blakey asi parizvino ari kuvimbisa Erica Sherman.
Donald akasangana naErica paaishandira Los Angeles Rams. Saka, vakava shamwari uye vakatanga kufambidzana nguva pfupi yapfuura.
Aaron naErica havana vana vavo. Ivo parizvino vavimbisana, uye vari kuronga kuroora munguva pfupi iri kutevera.
Munda weNFL nemusikana wake, Erica Sherman, pamubairo.
Zvimwe Zvakawanda nezvaAaron Donald Musikana - Erica Sherman:
Mukwasha waAaron Charles Donald ndiCommunity Affairs Manager. Iye anonyanya kushanda muindasitiri yemitambo. Moreso, Erica akamboshandira timu yeLos Angeles Rams. Iye zvakare ndiye maneja wekushambadzira wemukomana wake, Aaron Donald.
Erica Sherman akaenda kuLouisana State University. Haana chero vana. Nekudaro, ivo vaviri vakaratidza kutora imwe munguva pfupi mushure mekuroora kwavo. Vaviri vanogara pamwechete muCalabasas, California.
Aaron Donald Mhuri Chokwadi:
Baba vaDonald nemunin'ina vake vakabatsira mukubudirira kwaDonald mune ramangwana. Anobvuma vabereki vake, kunyanya baba vake, avo vakamupa dzidziso yakanakisa. Vabereki vake vane basa rakakomba maitiro. Saka ivo vakabatsira mukubudirira kwaDonald mune ramangwana.
Kunyangwe kupatsanurwa kwevabereki vake, hukama hwehukama huripo pakati pavo. Aaron Donald's Biography yaizove isina kukwana pasina ivo. Heano maitiro ehupenyu hwenhengo yega yega yemhuri yake.
Nezve Baba vaAaron Donald - Archie Donald:
Baba vaAaron, Archie Donald, akakurira kumaodzanyemba kweHomewood. Guta iri nhoroondo inzvimbo ine chisimba kwazvo yePittsburgh. Akambohwina chiitiko chekusimudza bhenji achimanikidza 405 mapaundi.
Archie akazopedzisira ave musoro wenyaya yeanotyisa mahure aakapa. Zvimwe zvacho zvinonzi zvakapwanya ngowani. Archie akatora chikamu munhabvu kusvika pagore rake rekutanga kuNorfolk State. Nehurombo, Akatyora kneecap yake uye haana kuzodzoka.
Archie akakura asina baba. Asi akavimbisa kuve aripo muhupenyu hwevana vake. Akambomhanyisa kambani yekuchenesa kwechinguva, asi yakazopera mushure megumi nerimwe zuva raGunyana 11, kurwiswa kwehugandanga kwakadzikamisa hupfumi.
Ona kunyemwerera kwababa vanozadzikiswa, Archie Donald Sr.
Archie akazoshanda mukuvaka ndokuendesa mabhuku efoni. Akashandisazve matairi, uye akabatanidza pamwe mabasa asinganzwisisike kuti asangane. Kunyangwe aisakwanisa kuzadzisa hope dzake, Archie aigara achikurudzira vana vake kuti vabudirire sezvavari nhasi.
Aaron paakabuda yeDziviriro Rookie yeGore mu2014, akashamisa baba vake netiraki. Zvakare, kwezuva rake rekuzvarwa makumi mashanu nematatu, akamutengera zvakare $ 53 Rolex Sky-Dweller wachi.
Mavhiki mushure mekusaina kuwedzera, vabereki vaAaron, chipangamazano wake wezvemari, vakapa portfolio vachivimbisa $ 1 miriyoni pamutero wega wega - mutero wakabhadharwa. Uye imba nyowani nyowani yesarudzo yavo. Ivo vaviri vakasiya basa ipapo.
Ivo baba vakadzidzisa vana vavo kukosha kwekushanda nesimba uye kusagadzikana. Mhuri yake mutsigiri weSteelers. Ivo vese vakarererwa muPittsburgh. Kunyange zvakadaro, ivo vachiri kutsigira Aaron nemaRams chero nguva yaari kupokana neSteelers.
Nezve Aaron Donald Amai - Anita Goggins:
Amai vaDonald, Anita Goggins, pakutanga aigara pamba kuchengeta vana vake vatatu. Nekudaro, mushure mekunge avasiya, akatanga bhizinesi rekufambisa.
Goggins aigara achitora nzira dzaipfuura nemunharaunda yemhuri kuti atarise vana vake. Dai aive kubasa panguva yemitambo yevanakomana vake, aisarudza nzira nemunda kana padyo.
Mushure mekunge Donald asayina mega-dhiri rake gore rapfuura, akabva afonera vabereki vake achivaudza kuti vasiye basa. Iye zvino Goggins anobatsira kutarisa vazukuru vasere.
Amai vaAaron vaenda pamudyandigere, Anita Goggins anobatsira kutarisira vazukuru vake.
Nezve Aaron Donald Mukoma - Archie Donald III:
Donald's Mukoma, Archie Donald Jr., aive Akabudirira Collegiate Nhabvu munhu wemitambo. Aive nyeredzi linebacker yeYunivhesiti yeToledo. Akasvetuka akatenderedza NFL seyakagadzwa yemahara mumiriri kudzamara asvika pamudyandigere mugore ra2012.
Idzo hama, dzaigovana mibhedha yemubhedha muhudiki hwavo, vaigara vachifunga nezvekubatsira vabereki vavo kuenda pamudyandigere rimwe zuva. Sekureva kwaGonzalez, yakava imwe yemasimba ekutyaira pabasa raAaron.
Archie Donald Jr. aivewo Akabudirira Collegiate Nhabvu munhu wemitambo.
Nezve Aaron Donald Sista - Akita Donald:
Akita Donald aigara achizivikanwa sehanzvadzi yechikuru yaAaron Donald ane mukurumbira. Akave ari mutsigiri ane simba mune rese basa raDonald. Uye zvakare, Aaron naAkita vanogovana hukama hwepedyo kwazvo.
Mushure mekuparadzaniswa kwevabereki vavo, ivo vaviri, kusanganisira mukoma wavo mukuru Archie Donald Jr. vanga varipo kune mumwe nemumwe. Akita Donald munhu akadzidza kwazvo. Ane Bachelor's degree mune zvemagariro evanhu aine mudiki mune zvepfungwa kubva kuCarlow University.
Pasina mubvunzo, Akita mukadzi akabudirira kwazvo. Pamwe pamwe nebasa rake sehunyanzvi hwepfungwa, arikubatsirawo Donald nenheyo yake yerudo muPittsburgh. Akita akaroora nevana. Kubva paakaroora, ava Akita Marie.
Mufananidzo waAkita Marie Donald nevakoma vake vaviri.
Nezve Aaron Donald Veukama:
Iyo trailblazing NFL mutambi wemitambo ane hama. Kunze kwababa vake, amai, uye hanzvadzi. Aaron Donald ane mashoma mashoma emhuri.
Ana sekuru, vanatete, vazukuru, mukuwasha nasekuru nasekuru. Saka nekudaro, Aaron Donald ane hama uye anogovera yakawanda nguva navo.
Aaron Donald Hupenyu hweMunhu:
Yedu Biography yaisazove yakakwana pasina kutaura nezve ake mararamire. Tinoziva Donald nekuve ane hushamwari, anozvininipisa mukomana. Asi gladiator pamunda. Iwe waigona kuona kutyaira uye chikamu chake chakaramba kudzikama. Donald anobva kumhuri yakabatana.
Anonakidzwa nekupedza nguva aine mhuri yake, vabereki, uye vanin'ina. Aaron murume ane muviri wakakura. Parizvino akachengetedza hunhu hwekushanda nesimba. Mutumbi waDonald inguva yekuwedzera yekuzvidzivirira. Uye Aaron anotarisa pahutano hwake.
Aaron inyanzvi yekusimbisa muviri. Iye weku Pittsburgh anogara akabatikana nemitambo yake uye kugwinya. Nekudaro, anoshandisa akawanda akanaka nguva mujimu yake. Zvakare, haawanzo kutora zororo. NFL Star yakaratidza kuda Ping pong.
Aaron inyanzvi yekusimbisa muviri uye nekudaro, anotarisa pahutano hwake.
Kwete kubva Forrest Grump pane chero munhu akaita kuti mutambo uratidzike seunonakidza. Ping pong ndechimwe chekuda kwaDonald. Akakudza hunyanzvi hwake kubva makore. Uyezve, Aaron Donald anotora mukana wevezvenhau.
Makondohwe Start anowanzoitika pane ake masocial handles. Ipuratifomu inobatsira kubvarura mukaha nemafans. Moreso, iye anotumira nezve ake maitiro ekurovedza muviri uye muviri wake wakasimba kazhinji. Aaron Donald ari kushanda pa Instagram, Twitter uye Facebook.
Aaron Donald, achisaina autographs yevateveri vake vane rudo.
Aaron Donald Mararamiro:
Nemakakatanwa ake, iyo NFL champ inokodzera iyo yakanakisa yehupenyu. Donald anotumidzwa zita kuPro Bowl mune yega yega yemwaka wake minomwe. Uye zvakare, Donald akatumidzwa zita rekutanga-timu All-Pro katanhatu, negore rake rookie ari ega anosara.
Iye zvakare mutambi-katatu anodzivirira mutambi wegore. Saka nekudaro, ivo vanokwanisa kuwana yemhando yepamusoro mararamiro. Kunyangwe hazvo airatidza kuti haasi wekushandisa mari. Waizviziva here kuti akatengera baba vake rori mushure mekuhwina mubairo weRookie wegore muna2014?
Vakamurekodha semutambi wechi10 akabhadharwa mubhola munhoroondo yeNFL. Aaron ane rupo kwazvo kumhuri yake uye neshamwari. Akatenga imba yavo yehudiki uye imwe imba yekuwedzera yevabereki vake. Zvakare, iye zvakare akavasiya pamabasa.
Aaron Donald ane Villa muOaks uye ine kunyange nzvimbo yekutamba, patio, choto, nhandare yemitambo, kunze kwemakamuri akati wandei ekurara uye foyer. Iyo Villa inokosha $ 4.7 Million.
Aaron anozivikanwa nemota. Zviripachena, kutenga mota yemhando yepamusoro hachisi chinhu chikuru. Iye ane yake Karma Revero mune yake muunganidzwa, inosvika madhora zviuru zana nemazana matatu. Imotokari yemagetsi.
Donald ane Karma Revelo Electric mota, inosvika madhora zviuru zana nemazana matatu.
Sekureva kwaCelebdoko, Aaron ane inoshamisa mambure akakosha emadhora makumi matanhatu emamiriyoni. Kutanga, mu60, akasaina chibvumirano chemakore mana chakakosha $ 2014 Mamiriyoni neSt. Louis Rams. Zvakare, Aaron akasaina kuwedzera-makore matanhatu ekuwedzera neRa Rams mu10.14, inokwana $ 2018 Million.
Zvichakadaro, iwo wepakati mubhadharo waAaron Donald ungangoita $ 22.5 Million pamwaka. Uye ndiyo yakakwira kwazvo mari yakambobhadharwa kune anozvidzivirira weNFL mutambi.
Muna 2019, aive ari pamusoro makumi maviri nemasere akabhadharwa vatambi. Mubhadharo wake muna 28 waive $ 2020 Million, zvakapetwa kaviri muhoro wegore rapfuura.
Uyu muhoro wazvino unoita kuti Donald ave akabhadharwa kwazvo-anodzivirira mutambi. Izvo zvakare zvinomuisa iye mugiredhi iro chete rakasarudzika makota makwikwi akawana. Iye zvino ari pane runyorwa rwevatambi venyika vanobhadharwa zvakanyanya, sekureva kwa Forbes.
Kutsigira uye kutsigira:
Aaron anotsigira zvigadzirwa zvakawanda. Mazhinji acho akajeka mumasocial media post. Iye anotambira yakawanda kubva kune yekusimbisa futi. Zvichakadaro, mari yake yaanowana yakakwira kusvika pamadhora mazana masere emadhora kubva pamabvumirano ake mu800,000. Saizvozvowo, anotsigira zvigadzirwa zvakaita sePanini, Zvemagetsi Zvemagetsi.
Zvakare, iye anowana zvakanaka kuburikidza nekutsigira Dick's Sporting Goods, iyo ine musika wekutengesa mutengo wepakati pe $ 82. Moreso, iye anowana kuburikidza nerutsigiro uye kutsigirwa kwemhando dzakakurumbira sePizza Hut, Dr Teals, uye kunyangwe mota yake, Karma Automotive.
Sezviri pachena, Yakagadzirira Kudya zvinovaka muviri ndeyake Venture. Chekupedzisira, iye anowanawo kuburikidza neshambadziro. Munguva pfupi yapfuura, akaita Hulu Commerce, kwaakatora chikamu mutenesi.
Aaron Donald Untold Chokwadi:
Seimwe yezvidziviriro zvinotyisa muligi, Yedu Biography timu inotarisira kuti Donald aite mitambo mikuru yeRams. Kunze kwezve zvataurwa pamusoro apa, pazasi pane zvishoma chokwadi chingafadza fancy yako nezve iye-katatu-anozvidzivirira mutambi wemwaka.
Chokwadi # 1: uremu hwaAaron Donald:
Donald aimborema kupfuura 128kg. Zvakangodaro, akarasikirwa nehuremu mushure mekunge vamunyora muNational Soccer League (NFL). Asi zvadaro, iye achiri anoomerera kuti kunyangwe chii chaanorema, anogara achiita chinhu chake.
Chokwadi # 2: Charity:
Akatanga "AD99 Solutions Foundation" kupa mikana kuvana vanotambura muPittsburgh. Inovavarira kupa dzidziso yekudzidzira, zvemitambo kudzidziswa uye kuraira, uye rutsigiro rwehutungamiriri. Hanzvadzi yake ndiye director director wenheyo.
Iyo isiri-purofiti hwaro yakambosarudza yekutanga kirasi yevane vanogashira vanogamuchira. Pamusoro pezvo, Donald ari kupedzisa kuvaka pane yedhorobha kondomu purojekiti semba yake yepamba panguva yemwaka. Iyo purojekiti ndeyeBhora Performance Center.
Mufananidzo pane yekutanga kuvhurwa kwaAaron Donald Nhabvu Performance Center.
Chokwadi # 3: Chirango:
Kunyangwe Aaron Donald ari mutambi wepasi rese, aigara achitarisana nekushoropodzwa nekuda kwehunhu hwake mumunda. Muchokwadi, mu2016, akakandirwa kunze kwemutambo uye akarangwa nehunhu hwake husina kugamuchirwa. Zvakare, iye akabhabhadzira imwe yeheti dzekumirisana naye.
Rams 'Aaron Donald akamborwisa akarova murume, achityora mhino. Akaratidza hunhu kune mukwikwidzi nekumukanda mureza wechirango. Zvakare, akakanda ngowani yake zvinehasha achibuda mumunda.
Chekupedzisira, nekuda kwekusazvibata kwake mumunda, akatongerwa madhora mazana maviri nemakumi maviri nemakumi maviri nemaviri. Uyezve, akabhadhara chirango che $ 21,270 kuNFL nekuda kwekusaita kwake mutambo mutambo.
Munguva pfupi yapfuura, muna Kubvumbi 2021, akapomerwa mhosva yekurova, uye gweta richamupomera mhosva. Kuferefetwa kuri kuitika, uye kana akawanikwa aine mhosva, Aaron achatarisana nechirango kana mamwe marudzi.
Aaron Donald Biography Pfupiso:
Aaron akaita kuti maRams akunde maviri Super Bowl Championship. Saka, vakamutumidza zita rekuti "Cheat Code."
Zvakadaro, kwatiri isu, ndiye anodzivirira nguva dzese uye anonyanya kuzivikanwa chiso munyika yenhabvu. Shandisa iyo tafura kuti udzidze zvakawanda nezve yedu NFL trailblazing Biography.
Zita rizere: Aaron Charles Donald
Zita rekudanwa: Cheat Code
Zuva rekuzvarwa: 23rd Zuva raMay 1991
Nzvimbo yekuzvarirwa: Pittsburgh, Pennsylvania, US
Basa: American nhabvu Player (inodzivirira tackle)
Chikwata: National Soccer League (NFL)
Nhamba yeJersey: #99
Dzidzo: Penn Hill (Pittsburgh, Pennsylvania) uye University of Pittsburgh.
Baba: Archie Donald
Amai: Anita Goggins
Vanun'una: Archie Donald Jr. (Hama) naAkita Marie Donald (hanzvadzi).
Musikana: Jaelynn Blakey
Hobbies: Gym / kugwinya, Ping pong uye kushandisa nguva nemhuri.
Weight: Makirogiramu 127 (280 lbs)
Muhoro: $ 35.5 M (anorambidza)
Net Worth: $ 60 M (2021)
Isu tinovimba iwe wakadzidza zvidzidzo zvishoma mukuputira Aaron Donald's Biography uye Yehucheche Hupenyu Hupenyu. Aaron Donald nemukoma wake Archie vakapedza nguva yakawanda vari pamwe chete. Pfungwa yekubatsira vabereki vavo kuenda pamudyandigere yaive hurukuro inogara iripo.
Sezviri pachena, nekufamba kwemakore, convo yakasimbiswa kuita chiroto chakadzinga Aaron. Zano racho rakamusundidzira kukurovedza muviri mangwanani-ngwanani.
Zvakazorodzawo kutarisa kwake mushure mekuramba kwezvikwata zviviri uye zvakakonzera hukasha hwakaita kuti asamire.
Pasinei nebasa rake rinonakidza, akachengetedza pfungwa yeFocus par kugona. Iye akatevera kuburikidza neiyo mwero wekugona kuburikidza nebasa rake rakaoma. Anoenderera mberi achidaro kuburikidza nedzidziso yake. Zvakanaka, nekuda kwerutsigiro kubva kuna baba vake.
Nhau dzakanaka ndedzekuti nhasi, izvo zvidiki zviroto zvazoitika. Donald ndomumwe weanonyanya kukwikwidza emakwikwi emitambo kukwikwidza pamusoro penyika. Ari Akatumidzwa Nha. 1 mu 'Vatambi 100 Vepamusoro ve2019' kuverenga.
Tinotenda kuti iwe wawana iyi Biography inonakidza. Nyorera zvimwe zvebhaibheri chokwadi neyekutanga-kirasi mhando.